Mpanamboatra kabinetra sy orinasa tsara indrindra | Media
Kabinetra maoderina MEDO
Ny kabinetra Medo dia mampiseho endrika maoderina miaraka amin'ny vidiny mirary.
Ny fahafantarana ny ahiahin'ireo mpampiasa farany, ny kabinetra MEDO ho an'ny fitsanganana amin'ny fahitalavitra dia samy manana ny endriny sy ny endriny tiany; ary ny takelaka MEDO dia manome fitehirizana ampy ho an'ny lovia, volafotsy, ary vera. Ny fampiasana ny veneer sy vy metaly avo lenta, miaraka amin'ny fizotran'ny famokarana mandroso sy ny fizotry ny fifehezana kalitao henjana, ireo rehetra mikarakara ny tsena kendrenao ary azo amidy dia afaka manampy anao hatrany amin'ny sandan'ny marika.
Kabinetra TV maoderina ambony
Ny fahitalavitra maoderina miaraka amin'ny marbra no endrika farany. Izy io dia manana endrika tsotra nefa kanto. Ny fampiasana ranjo varahina fonosina amin'ny lasely soavaly avo lenta dia manome fahatsapana sy fahamendrehana maoderina kokoa amin'ny fijery ankapobeny, sady manitatra faharetana ary manatsara ny ampahany lehibe.
Fijoro TV Wooden efi-trano
Ny tsipika amin'ny lalimoam-pitaovana dia madio sy milamina, miaraka amin'ny hatsaran-tarehy mahazatra. Ny tsiro tsy manam-paharoa, azo ampifanarahana amin'ny fanaka fomba maoderina na nentim-paharazana. Ny veneer vita amin'ny hazo matevina nohosorana tanana dia mampiseho ny fahaizan'ny antsipirihany sy ny asa-tànany. Ny fitaovana dia vita amin'ny Smoke Veneer sy 304 Stainless Steel Titanium Plated.
Fijoro fahitalavitra vita amin'ny hoditra
Ny kabinetra amin'ny fahitalavitra dia miavaka amin'ny fifangaroana mirindra amin'ny fomba samihafa. Ny tsipika ny varavaran'ny kabinetra backlit dia mitambatra amin'ny toerana fitahirizana boribory, zorony boribory ary tongotra manify, mamela ny hazo matevina sy ny metaly matevina hiara-mipetraka tsara.
Kabinetra TV vita amin'ny hazo amin'ny lasely
Mijoro amin'ny famaranana ny hazo terebinta ny fahitalavitra. Manana tongotra vy avo izy io izay manamora ny fanadiovana azy amin'ny fiainana isan'andro. Ny ambongadiny roa miafina dia manampy amin'ny fandaminana ny tariby ho an'ny votoatin'ny fialam-bolyo mba hamonjy ny habaka iainanao amin'ny korontana. Amin'ny maha iray amin'ireo lahasa fototra an'ny fahitalavitra dia manana vatasarihana roa lehibe itehirizana azy io raha toa kosa ny kojakoja fampiasa amin'ny kalitao avy amin'ny marika malaza no ampiasaina hanitarana ny fampiasana ny fahita fahitalavitra.
Kabinetra / konsole amin'ny lafiny kely indrindra
Ny kabinetra MEDO Side amin'ny endrika mahazatra dia lalao mifanaraka amin'ny efitrano fisakafoana. Ny habe mety, ny endriny avo lenta, ary koa ny fitehirizana entana lehibe dia mahatonga azy io ho ilaina sy azo ampiharina ao amin'ny efitrano fisakafoana.
Latabatra Console Efitra fandraisam-bahiny
Ny latabatra Console MEDO dia mampiseho ny hakanton'ny asa-tanana miaraka amina fifandonana amin'ny fitaovana sy loko isan-karazany. Ny kofehy dia kofehy metaly voaravaka; ny fizarazarana sy ny tampon'ny kabinetra dia hazo matevina na hazo terebinta; ary ny takelaka dia hazo fisaka vita amin'ny hazo terebinta na oba-lozika. Ny varavaran'ny fonosana matevina dia mivelatra ivelany, ary ny atin'ny sideboard dia voaravaka hazo.
Kabinetra sy boaty kiraro tsy manam-paharoa
Azo ampiasaina ho kabinetra sy kiraro amin'ny lafiny roa izy io. Miaraka amin'ny fifangaroana hazo sy hoditra tonga lafatra, dia manome fomba fijery mamelombelona ao an-tranonao ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na fidirana. Izy io dia miaraka amina varavarana misokatra efatra mampiasa loko mifanohitra izay mampiavaka azy amin'ny fanangonana. Ny fitehirizana lehibe koa dia endrika manintona, mifanaraka amin'ny fomba fiainanao tsotra.
Latabatra fisakafoanana mihaja ankehitriny
Ny latabatra Console dia singa miasa izay mety amin'ny lakozia sy ny efitrano fisakafoana. Ny afovoany dia be fiheverana fanampiny miaraka amina sosona roa manitatra boaty fitehirizana, ny sosona fototra dia fitehirizana lehibe. Ny fifangaroana marefo dia manatsara tanteraka ny fiainanao isan'andro. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny akanjon'ny lasely sy ny tampon'ny marbra na ny tampon'ny hazo, dia hanasongadina ny filozofian'ny fiainan'ny tompony amin'ny lamaody minimalist sy lamaody.
Stand TV mihaja | Efitra fandraisam-bahiny maoderina TV Design | Volavola kabinina fahitalavitra hazo
Ireo mpanjifa izay mitady fantsom-pahitalavitra fanao dia samy manana ny endrika sy ny safidiny amin'ny endrika. Ny fahazoana an'io ahiahy io dia mamorona fijanonana fahitalavitra mahazatra sy maharitra i MEDO izay manome fahafaham-po ny tsena kendrenao.
Mampiasa fitaovana avo lenta, ny endrika farany, ary ny fanamboarana manam-pahaizana, manamboatra fantsom-pahitalavitra manokana arakaraka ny famaritana anao. Ny toeram-pivarotana fahitalavitra MEDO 'mora vidy dia afaka manampy anao manampy sanda.
Living Room TV Stand Series dia iray amin'ireo fahitalavitra ambony indrindra amin'ny fanangonana MEDO. Iray amin'ireo ankafiziny eny an-tsena io. Ny mpamorona MEDO dia manome loko vaovao azy izay be mpampiasa amin'ny fanaka. Mba hahatratrarana ny fitakian'ny haben'ny habaka samihafa, dia afaka manitatra ny halavany koa amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tontonana miakatra hahalava na fohy kokoa. Izy io dia azo ovaina amin'ny toerana samihafa.
Fomba fanaka an-trano endrika vaovao | Mitsangàna Steel TV Stand | Kabinetra TV Minimalista maoderina
Ny ampahany lehibe dia ao amin'ny ampahany Veneered MDF manampy fomba hafa. Ny fotony dia vy mahery karbaona ka mety ho matanjaka be ary miaraka amin'izay koa.
Miaraka amina endrika maoderina iray dia mampifangaro ny fahatsorana sy ny fiasa miaraka izy. Ankoatr'izay, ireo vatasarihana lehibe dia manolotra toerana fitehirizana lehibe ary mahatonga ny fahitalavitra ho azo ampiharina. Ny hazo matevina sy ny lasely misy tampon'ny marbra dia mahatonga azy io ho matanjaka sy miorina amin'ny rafitra ho an'ny fampiasana azo antoka sy maharitra.
Ny latabatra console amin'ny fidirana no fahatsapana voalohany ny fanaka ao amin'ny trano. Na dia ampiasaina amin'ny fomba fidirana aza izy io, ny latabatra console MEDO dia azo ampiharina amin'ny toerana rehetra ao an-trano ary azo ovaina tsy misy farany.
Ny latabatra fampiononana MEDO dia mampifangaro ihany koa ny endrika kanto sy ny fampiasana. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny milina avo lenta sy ny fitaovana avo lenta, azonao antoka ny momba ny kalitaon'ny latabatra console MEDO.
Tsotra sy maoderina ny endrika izay miovaova amin'ny fomba sy habaka maro. Izy io dia mampifangaro hazo sy vy tena tsara hanehoana endrika maoderina. Ny ambony dia manome boaty kely hitehirizana lahatsoratra kely mety hanampy amin'ny fandaminana ny fidiranao. Ny fotony dia tonga amin'ny fantsom-by vy mainty toradroa. Na dia manify aza izy io, dia matanjaka noho ny kalitaon'ny vy tsara.
Latabatra Console Minimalista avo lenta | Fitaovana fitahirizana efitrano fandraisam-bahiny Fanaka amin'ny kabinetra lalantsara
Miaraka amina endrika maoderina iray dia mampifangaro ny fahatsorana sy ny fiasa miaraka izy. Ny hazo mafy sy ny lasely miaraka amina fotony marbra dia mahatonga ny rafitra matanjaka sy marin-toerana ka azo antoka fa azo ampiasaina.
Kabinetra TV amin'ny fanaka maoderina
Fitaovana: Baja, hoditra pelika Premium, Walnunt Veneer nafarana
Faritra ambany Tongotra vy + hoditra milomano
TV Stand 2170 * 420 * 680mm
Fitaovana: Veneer setroka, 304 Stainless Steel Titanium Plated
TV Stand 2200 * 400 * 430mm
Fitaovana: Vy vy nolokoina, veneer vita amin'ny walnunt avy any an-tsena, hoditra milomano premium
Faritra ambany Tongotry ny vy
TV Stand 2030 * 415 * 490mm
Fitaovana: Hoditra saddle premium ， vy mainty, oaka
Kabinetra momba ny fanaka maoderina
Cabinet eo amin'ny lafiny 1380 * 380 * 1500mm
Fitaovana: Vy vy mainty, hazo terebinta mainty sy fotsy, hoditra lasely premium
Cabinet eo amin'ny lafiny 1250 * 420 * 1390mm
Fitaovana: Hoditra saddle premium ， 304 titanium vy tsy misy tadiny nopetahany takelaka
Cabinet eo amin'ny lafiny 900 * 400 * 1080mm
Fitaovana: Sarina vy vita amin'ny hosodoko, hoditra milomano premium, veneer avy any ivelany
Cabinet eo amin'ny lafiny 1200 * 400 * 890mm
Fitaovana: Steel, Hodi-koditra premium, izy io dia Walnunt Veneer
Teo aloha: LOHA